Izinga lokushisa eliphakeme le-ceramic crucible ye-sintering encapsulted pigments ebomvu yezitsha zobumba
I-mineral fire assay clay crucible yegolide
I-pigment sintered ceramic crucible yethu inika ukuphila isikhathi eside, ukuncibilika ngokushesha, isivinini esingapheli sokuncibilika kanye nokumelana okukhethekile noshintsho olunamandla lokushisa.
Senza futhi sinikeze ukusebenza okuphezulu kwe-pigment sintered ceramic crucible. ingxube yesayensi yamaqoqo ezinto ezibonakalayo, ukucindezela okufanele ngodayi abanembile, namazinga okushisa afanele aqeda lapho ashiswa khona, kunikeza izinga eliphakeme kakhulu lamandla omshini ukuze amelane nokushaqeka okukhulu okushisayo. Izinto ezisezingeni eliphezulu ezisetshenziswa ekwenziweni kwazo, kuhlanganiswe nokukhiqizwa okulawulwa ngokucophelela, kuqinisekisa ukushisa okwengeziwe nge-crucible ngayinye, ngaleyo ndlela kunikeze inani elithe xaxa.
Uhlelo lokusebenza oluyinhloko i-sintering encapsulted pigments ebomvu yezitsha zobumba, usayizi owenziwe ngokwezifiso uyamukeleka.Ikhwalithi ephezulu kanye nenkonzo esheshayo umgomo wethu.
i-pigment sintered ceramic crucible inokumelana nokuqhekeka okuphakeme kunokuvamile ngaphansi kwezimo zokushisa eziphezulu. Ama-crucibles ethu asetshenziswa kuma-kilns ahlukahlukene ukuze afake izimpushana ezihlukahlukene ze-pigment. Sinezinhlobonhlobo zomumo nosayizi abatholakalayo ukubhekelela imininingwane edingekayo.
I-Pigment Sintered Ceramic Crucible
Ukuhlinzeka ngezinhlobo zezivivinyo zokuhlola umlilo,Imodeli evamile nezinga lokuthekelisa kungakhethwa,ukwenza ngendlela oyifisayo kwamukelekile.Ukusetshenziswa okuyinhloko kwe-Fire assay yokuhlaziya i-Precious Metal, Ilabhorethri Yezimayini, Ukuhlolwa Kwaselabhorethri, Ukuhlolisisa Amaminerali, Ukuhlolisisa Umlilo, Ukuhlolisisa Igolide
Ethengiswa kakhulu kunazo zonke i-Assaying Fire Clay Crucible | I-XTL
Izikhiqizo zethu ezithunyelwa emazweni amaningi, eRussia, eCanada, e-Afrika, eBrazil, eMongolia, e-Australia, emazweni angaphezu kwama-20, ikhwalithi yomkhiqizo kanye nenkonzo kunconywa kakhulu ngamakhasimende.
Ukuhlaziywa kohlaziyo lwe-clay crucible embonini yezimayini | I-XTL
I-Fire Assay Refractory Clay Crucible isetshenziswa kakhulu ekuhlaziyeni amasampula ensimbi namasampula ancibilikayo kumalabhorethri, amalabhorethri amaminerali kanye namalabhorethri ahlukahlukene ezimboni.
Ukusebenza okuphezulu kokuhlolwa kobumba lomlilo wokuhlola izimayini | I-XTL
I-Fire assay iyindlela yakudala yokuhlaziya yokusebenzisa izimiso nezindlela ze-metallurgical kukhemistri yokuhlaziya. Ukuhlola okuqukethwe kwezinsimbi eziyigugu kumaminerali nemikhiqizo yensimbi okunqunywa ukuncibilika nokugazinga. Le ndlela inezinzuzo zokumelwa kahle kwesampula, ukusetshenziswa okubanzi, umphumela omuhle wokucebisa nokunye .